08 Jul, 2021 - 15:07 2021-07-08T15:29:23+00:00 2021-07-08T15:29:23+00:00 0 Views
NDIRI musikana ane makore 36, ndinodawo murume ane makore 45 — 48 anoda zvemba. Ngaave asingaite gumbo mumba gumbo panze uye asina chirwere. Anenge andifarira ngaandibate pa — 0714 814 797.
Makadii pachirongwa? Ndiri murume wemakore 46, HIV+ uye ndine vana 2 vakura. Ndotsvagawo mukadzi wekufambidzana naye ane makore 36 kusvika 48. Nhamba dzangu dzekufona — 0714 688 543.
Ndiri musikana ane makore 19, ndinotsvagawo shamwari (penpal) angave mukomana kana musikana. Vandifarira musafona isai meseji chete pa — 0780 544 628.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore makumi matatu, ndotsvakawo murume anoda zvekuroora. Ndine mwana mumwe chete, nhare yangu — 0773 002 538.
Ndiri musikana ane makore 30, ndiri pamushonga asi handiratidze uye ndinoshanda. Ndinoda murume ane makore 32 – 42 anoshanda, anogeza uye asingaratidzikewo. Ngaave anoda kuroora asi varume vevanhu kwete. Andifarira ngaandibate pa — 0779 248 880.
Kwayedza makadii? Ndiri murume ane makore 30, kumusha ndekwaRusape uye ndoshandira muHarare. Ndinotsvaga mudzimai ane makore 18 zvichikwira, ndobatika pa — 0782 309 274.
Makadii? Ndiri murume ane makore 32, ndotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 20 — 27. Ndine vana 2 uye ndogara kumusha. Andifarira ngaandibate pa — 0714 845 123.
Makadii? Ndiri murume ane makore 40, ndinodawo mukadzi asiri pamushonga ane makore 40 zvichidzika. Zvizhinji totaura pa — 0777 560 750, ndiri kuBindura.
Ndodawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 24. Ndine makore 28 uye ndinogara muHarare. Andifarira anofona pa — 0713 424 493.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 40, ndotsvagawo mudzimai wekuroora. Anoda nhare idzi — 0778 443 080.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 25 uye ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 23 zvichidzika. Anoda ngaandibate pa — 0775 322 339.
Makadii Kwayedza bepanhau reruvheneko? Ndiri murume ane makore 51. Ndinotsvagawo mudzimai wekuroora. Nhare yangu — 0788 803 325.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 39, ndiri positive uye ndodawo murume ari positive anoda wanano. Nhare yangu — 0771 325 024.
Makadii? Ndiri murume ane makore 30. Ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 26 asinawo chirwere. Nhamba dzangu — 0738 537 617.
Makadii? Ndotsvagawo musikana kana mukadzi ane makore 18 – 35. Ndine makore 34 uye ndogara muHarare. Nhamba dzangu — 0776 001 703.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28, ndinotsvagawo musikana akanaka asina chirwere ane mazirudo ane makore 25 zvichikwira. Ngaave anogara muHarare, nhare yangu — 0712 493 547.
Makadini? Ndiri murume ane makore 50, ndinotsvaga mukadzi ane makore 18 kusvika 30 ari muHarare. Ndiri HIV negative, andifarira ngaandibate pa — 0733 753 299.
Makadii? Ndiri kudawo musikana ane makore 19 — 25 asiri pamushonga. Ndibatei pa — 0782 476 062.
Ndingafara mukashambadzawo yangu tsamba. Ndiri mukomana wemakore 24, murefu uye anoshanda. Ndinotsvagawo musikana ave kuda imba, ngaandibate pa — 0715 992 424. Ndinogara muKaroi.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 30, ndinotsvaga musikana wekuroora ari pachokwadi. Ngaandibate pa — 0719 838 165.
Makadii zvenyu? Ndiri murume ane makore 36 okuberekwa uye ndinotsvagawo mukadzi ane makore 20 kusvika 36. Andifarira anondibata pa — 0712 151 056.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 28, handisi pamushonga uye ndinotsvakawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 26 chero ane mwana 1. Anoda zvekumusha andifarirawo ngaandibate panhamba dzangu 0713 414 395. Ndinonzi Edson Chinogwenya, ndinogara kuMasvingo.
Makadii? Ndiri murume ane makore 38, ndotsvaga mukadzi ane makore 25 — 31. Ngaave nemwana mumwe chete uye anoda zvemba. Nhare yangu — 0774 763 083.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 44 nevana vatatu uye ndinogara muHarare. Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 25 kusvika 43. Ari pachokwadi andifarira nhamba dzangu — 0783 240 917.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 26 nevana 2. Ndotsvagawo shamwari yekufambidzana nayo, andida ngaandibate pa — 0718 325 123.